जौमाना हडाड अन्तर्वार्ता: डोब्रिना जेकोबा/अनुवाद: सुरज सुवेदी
‘जसद’ अरब संसारमा प्रकाशित एक मात्र त्यस्तो पत्रिका हो, जसले अरब संसारमा निषेध गरिएका यौनिकता र 'इरोटिक'जस्ता विषयहरूलाई समावेश गर्थ्यो। उनी महिला अधिकारको ठूलो समर्थक हुन् र जसले ‘आई किल्ड सेचेहराजादो: कन्फेसन अफ एन एङ्ग्री अरब वुमन’ जस्ता किताब लेखेकी छन्। उनी लेबनानको दैनिक पत्रिका एन-नहारको सांस्कृतिक पन्नाहरूको पहिलो महिला सम्पादकसमेत हुन्। उनै होडाडसँग डोब्रिना जेकोबाले लिएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। जसको अनुवाद सुरज सुवेदीले गरेका हुन्।
[caption id="" align="alignnone" width="656"] हडाड सम्पादक रहेको जसद म्यागेजिन[/caption]
र, अर्को कुरा गर्नैपर्ने विषय भनेको यौन स्वतन्त्रता हो। जब म यौन स्वतन्त्रता भन्छु, अरब संसारमा धेरैले यसलाई गलत बुझ्छन्। यसको मतलब कोही महिला नाङ्गै भएर सडकमा हिँड्नु तथा भेटेजति पुरुषहरूसँग यौन सम्पर्क राख्नु हो भनेर मैले भनेको हुँ भन्ने बुझ्छन् उनीहरू। यो मैले उठाइरहेको कुरालाई कमजोर बनाउने सोच हो। जब म यौन स्वतन्त्रताको विषयमा कुरा गरिरहेको हुन्छु यसको मतलब हुन्छ कि मानिसले आफ्नो शरीरलाई आफ्नो भन्न पाउनुपर्छ र शरीरसँग के गर्ने के नगर्ने भन्ने अधिकार उनीहरूको हातमा हुनुपर्छ। दैनिक १० जना मानिससँग सुत्ने होस् वा विवाह गर्नुभन्दा पहिला कसैसँग नसुत्ने होस् यसको अधिकार आफूसँग हुन पाउनुपर्छ। यसको निर्णय आफैंले गर्न पाउनुपर्छ। यदि यौन सम्पर्क गर्ने कसैको इच्छा छ भने उसले विवाहसम्म 'भर्जिन' भइराख्ने बन्धनबाट मुक्त हुन पाउनुपर्छ। यदि कसैले यही छनौट वा स्वतन्त्रताको लागि हरेक दिन लडिरहनुपर्छ र यसको कारण पीडादायी जीवन बिताइरहनुपरेको छ भने यो छनौटको कुरा हैन, जबरजस्ती लादिएको कुरा हो। म त्यसको विरोध गर्छु।
मैले ‘आई किल्ड सेहेरजादो’ किताब दुईवटा कारणले लेखेको हुँ। पहिलो, तपाईंले भनेजस्तै पश्चिमा अरबी महिलाहरूको बारेमा भएको होलसेल सामान्यीकरणले म वाक्क भएको थिएँ। र दोस्रो, कारण के हो भने मैले यो अरबी महिलाहरूको लागि लेखेको हुँ किनकि हामी विभेदको सिकार हुन्छौं तर त्यहाँबाट आफूलाई स्वतन्त्र गर्न कुनै प्रयत्न गर्दैनौं। जस्तो कि- धेरै महिलाहरूले महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गर्छन् तर यो धेरै मेहनतपछि र विशेषगरी आर्थिक रूपमा सबल नभई आउँदैन भन्ने कुरा थाहा पाँउदैनन्। महिला साँच्चै स्वतन्त्र र उन्मुक्त हुनुछ भने सबैभन्दा पहिलो सर्त आर्थिक सबलता हुनैपर्छ। यही एक मूल्य धेरैजसो अरबी महिलाहरूले अहिलेसम्म चुकाउन सकेका छैनन् वा चुकाउन चाहिरहेका छैनन्। त्यहाँ महिलाको ठूलो हिस्सा छ, जो पढ्नको लागि कलेज त जान्छन् तर उनीहरू यस्तो तरिकाले हुर्किएका छन् कि महिलाहरूको मुख्य उद्देश्य राम्रो श्रीमान् पाउनुभन्दा अरू पनि हुनुपर्छ भन्ने थाहा छैन। यसले उनीहरूको अध्ययनलाई केवल 'टाइम पास' मात्र बनाइरहेको छ। त्यसैले त्यो किताब अरबी महिला तथा अरबी आमाहरूको लागि पनि थियो। कसले यत्रा सबै दमदार मर्द र कमजोर निरीह महिला भनेर हुर्काइरहेको छ? महिलाहरू आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानिरहेका छैनन्?
र पश्चिमले अरब महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गर्दा ‘सबै मुस्लिमहरू आतङ्कवादी हुन्। सबै मुस्लिम महिलाहरू दबिएका छन्’ भन्नुजस्तै हो। उनीहरू सबै मानिसहरूलाई एउटै टोकरीमा हालेर नाम दिन सिपालु छन्। यसलाई कम गर्नुछ भने यहाँका मान्छेहरूको व्यक्तिगत सङ्घर्ष र सफलताका कथाहरूलाई 'फोकस' गर्नुपर्छ अनि मात्र अरबी संसार बारेका गलत बुझाइ र धारणाहरू परिवर्तन हुन्छन्। यहाँ धेरै कलाकार, लेखक, विद्वान, बिजनेस वुमन, तथा बिजनेस म्यानहरू छन् जसले गज्जब काम गरिरहेका छन्। र कहिलेकाहीँ नै सही, उनीहरू १२ वर्षमै जबरजस्ती बिहे गरिएकी तथा डरलाग्दो यौन हिंसामा परेकी बालिकाको कथाभन्दा पहिला प्रकाशित हुन लायकको काम गरिरहेका छन्। म भेदभाव र दुर्व्यवहार तथा हिंसाको कथाको महत्वलाई नकारिरहेकी छैन तर समुदायमा चेतना फैलाउन माथि भनेजस्ता राम्रा मान्छेहरूको कथा पनि लेखिनु जरुरी छ। यस्ता सामाग्रीहरूले सबै अरबी महिला तथा पुरुषहरू त्यस्ता छैनन् है भन्ने सन्देश पनि जान्छ र एकतर्फी सोचाइमा सन्तुलन पनि ल्याउँछ। किनकि सबै अरबी मानिसहरू एकै छैनन्। यो समयमा मानिसहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्नु जरुरी छ किनकि हरेक दिन हामी कुनै न कुनै देशमा भएको आतंकवादको समाचार मात्र सुनिरहेका हुन्छौं। मान्छेले मान्छेको घाँटी काटिरहेको समाचार कति भयानक छ जसको नजिक हामी बाँच्नु परिरहेको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ७, २०७४, ०६:५२:५३